Walaalo dil iyo dhaawac loogu geystay dalka Koofur Afrika | KEYDMEDIA ONLINE
Walaalo dil iyo dhaawac loogu geystay dalka Koofur Afrika
Kooxo burcad Koofur Afrikaan ah ayaa xalay dilay dil iyo dhaawac ugu geystay magaalada Cape Town labo wiilal oo walaalo ah.
CAPE tOWN, Koofur Afrika - Wararka ka imaanaya dalka Koofur Afrika, ayaa sheegaya in Cape Town lagu dilay wiil Somaaliyeed, mid kalana lagu dhaawacay, kuwaas oo ka mid ahaa qanacsatada Soomaaliyeed ee dhaqan dalka ay dhawaan ka qarxeen rabshadaha salka ku haya, xarigga Madaxweynihii hore Jacob Zuma.
Buracadda dilka iyo dhaca geystay, ayaa weerar ku qaadday dukaan ay lahaayeen wiilashan Soomaalida ah, xilli ay ku guda jireen howlahooda ganacsi, iyagoo dilay Axmed Macalin Jimcaale, halka ay dhaawaceen walaalkiis ka weyn Maxamed Macalin Jimcaale.
Weerarkan ayaa waxaa uu ka dhacay Xaafadda Kraaifontein oo ka tirsan Magaalada Cape Town ee Dalka Koonfur Afrika.
Sida wararku sheegayaan, Tuugada oo shan nin ahaa ayaa iyagoon qofna wax weydiin xabadaha ku ku furay dukaanka, taasoo haleeshay Axmed oo halkaas ku dhintay halka Maxamed oo dhawac ah uu hadda yaallo Isbitaalka Kraaifontein, barcadda ayaana dhacay lacagihii Dukaanka yiilay.
Booliska dalka Koonfur Afrika oo goobtaas gaaray wax yar ka dib ayaa wada baaritaano, iyadoo kooxdii burcada aheyd ay goobta goor horeba ka baxsadeen.
Rabshadaha ka socda dalka Koonfur Afrika ayaa sii krdhaya ayadoona ajaanib badan oo Soomaali ka mid tahay lagu dilay hantodoona la dhacay 10-kii Maalin ee la soo dhaafay.
Dowladda Soomaaliya ayaa ugu baaqday dhiggeeda Koofur Afrika, in ay xil iska saarto ilaalinta muwaadiniinta Soomaaliyeed kuwaas oo naftooda iyo maalkoodaba ay halis daran wajahaday maalmihiin na weydaartay, sida lagu sheegay war qoraal ah oo dhawaan ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Xukuumadda Xil-gaarsiinta.